Basa re cylinder musoro gasket uye zvinhu
Musoro gasket chinhu chakakosha mukati meinjini inotsva. Musoro gasket unovimbisa kumanikidza kunogadzirwa kubva pakupfuta kweparaki yemafuta emafuta kunoramba kuri mukati memoto unopisa. Iyo yekutsva kamuri ine iyo pistoni uye inoda yakakwira huwandu hwe pre ...
Chinyorwa chinoshandiswa Oiri Seal
1. Chisimbiso chemafuta chine mhete yesimbi semasaga emukati ayo anopa kugadzikana kwechimiro kune chisimbiso chemafuta. 2. Ganda rekunze rakagadzirwa nenitrile rabha uye zvimwe zvakasiyana zvinhu zvinoshandiswa maererano nezvinodiwa. 3. Chitubu pamuromo wemafuta se ...
Maitiro ekutsiva vharuvhu yekuvhara gasket
Ø Bvisa Injini Kavha Kutanga, iwe unofanirwa kubvisa iyo injini yekuvhara. Makanika anozofanira kubvisa kavha epurasitiki yeinjini kuti awane vharuvhu. Tevere, ivo vanobvisa izvo zvinodikanwa zvikamu. Pamainjini mana-humburumbira, iyovhavha yevhavha inogona kuwanzo svitswa ...